प्रधानमन्त्रीको गृह नगर दमकमा डेढ अर्बको १८ तले भ्यु टावर बनेपछि छेउछाउमा देखिनेछ यस्तो दृष्य | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रधानमन्त्रीको गृह नगर दमकमा डेढ अर्बको १८ तले भ्यु टावर बनेपछि छेउछाउमा देखिनेछ यस्तो दृष्य
प्रधानमन्त्रीको गृह नगर दमकमा डेढ अर्बको १८ तले भ्यु टावर बनेपछि छेउछाउमा देखिनेछ यस्तो दृष्य
पुस १२ गते, २०७७ - ०६:४७
झापा । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमकमा सरकारले डेढ अर्ब लगानीमा सय मिटर अग्लो भ्यु टावर बनाउँदैछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश १८ तले यो टावरको निर्माणले वरिपरिका सर्वसाधारणलाई भने हर्षभन्दा चिन्ता थपेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – भ्यु टावरको पश्चिमतिरको पर्खालसँगै जोडिएको टुकुरेबस्तीमा सय परिवार सुकुमबासीको बसोवास छ । ०२२ देखि त्यहाँ बसोवास गरिरहेका उनीहरूले अहिलेसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएका छैनन् । टावर बन्न थालेदेखि उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटिने चिन्ताले मात्रै सताउँछ । सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनमा कुनै चासो देखाएको छैन ।
टुकुरेबस्तीकी ६५ वर्षीया भीमकुमारी विकले आँगनमै भ्यु टावर ठडिएपछि बस्तीबाटै हटाउँछ कि भन्ने चिन्ताले राति निद्रा पनि नलाग्ने बताइन् । यही बस्तीमा जीवनका पाँच दशक बिताइसकेकी उनले भोगचलन गरेको १२ कट्ठा जग्गाको फिल्डबुक भए पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएकी छैनन् ।
‘आँगनमा भ्यु टावर त बन्यो नि ! तर, हामीलाई हर्ष न विस्मात ! जग्गा हुनेले जग्गाको भाउ पाए । उनीहरू धनी भए । हामी सुकुमबासीको के छ र !’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट पनि हटाउने रे भन्ने सुनेकी छु । यहाँबाट खेदायो भने यो उमेरमा कहाँ जानू ?’
स्थानीय राम भुजेलको चिन्ता पनि भीमकुमारीकै जस्तो छ । निर्माणाधीन भ्यु टावरको पर्खाल उनको घरसँगै जोडिएको छ । दमकका धेरै मान्छेले भ्यु टावरमा आर्थिक समृद्धि देख्दा उनीचाहिँ आफ्नै घर छोडेर हिँड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
‘अस्ति पनि अलिअलि जग्गा भ्यु टावरमा प¥यो । अब घर बाँकी छ । यो पनि भ्यु टावरसँगै जान्छ कि भन्ने चिन्ताले मात्रै सताउँछ,’ उनले भने, ‘धेरैले हल्ला गर्छन्, यहाँबाट हामीलाई उठाउँछ भनेर । भ्यु टावर आएर जीवनस्तर राम्रो हुन्छ भन्थे, हामीलाई त चिन्ता मात्रै थप्यो ।’
वेलावेलामा बस्तीमा आउने अपरिचित व्यक्तिहरूका कुराले स्थानीयलाई झन् धेरै अत्यास बनाउँछ । उनीहरू त्यो क्षेत्रमा एउटै खालका होमस्टे बनाउने भन्दै गफ गर्छन् । ‘एउटैखाले होमस्टे बनाउने भन्छन् । हामी सुकुमबासीसँग त पैसा छैन, कसरी बनाउँला ? हामीले बनाउन नसके यहाँबाट लखेट्ने रे !’ स्थानीय रणबहादुर भुजेलले भने, ‘०२२ सालदेखि खुनपसिना बगाएर बसेका हामीलाई त्यत्तिकै लखेट्न पाइन्छ र ?’
टावर बनिरहेको आँपगाछी गाउँको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । सडक धुलाम्मे छ । स्थानीयले पिउन शुद्ध पानी पाएका छैनन्, ट्युुबेलको पहेँलो पानी पिउन विवश छन् । स्वास्थ्य सेवा लिन ६ किलोमिटर पूर्व दमक बजार धाउनुपर्ने बाध्यता छ । जनसरोकारका यस्ता महत्वपूर्ण विषयभन्दा सरकारको प्राथमिकतामा भ्यु टावर परेको छ ।
‘हामीले भोट दिएका नेता प्रधानमन्त्री बने । यहाँ भ्यु टावर पनि बन्दै छ । तर, हाम्रो जीवनचाहिँ अभाव र चिन्तामै बितेको छ,’ स्थानीय दिलमा भुजेलले भनिन्, ‘न खानेपानी आएको छ, न त राम्रो बाटो नै बनेको छ । अहिले पनि हामी ट्युुबेलको पहेंलो पानी पिउन बाध्य छौँ । खुसी त जग्गा किनबेच गर्ने दलालहरू भएका होलान् । जग्गाको भाउ बढ्यो नि त !’
दमक– ३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले भ्यु टावरवरिपरिका सुकुमबासी विस्थापित नभएर स्थापित हुने बताए । ‘उहाँहरू त्यहीँ स्थापित हुनुहुन्छ । सहरी विकास कार्यालयमार्फत चलेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत त्यहाँका विपन्नले अब घर छाउन चाँडै जस्तापाता पाउँदै छन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरू ढुक्क भएर बसे हुन्छ । कसैले पनि उहाँहरूलाई हटाउँदैन ।’
भ्यु टावरको २५ प्रतिशत काम सकियो
१५ महिनाअघि निर्माण सुरु भएको भ्यु टावरको काम २५ प्रतिशत पूरा भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश यो टावरको लागत एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार एक सय ६४ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
अहिले टावरको तल्लो तला ढलाइको तयारी भइरहेको छ । लकडाउनमा सबै विकास निर्माणका काम रोकिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको चासो रहेको यो टावरको काम केही दिन रोकिएपछि पुनः धमाधम थालियो । चिनियाँ कम्पनी जेडसिजिआइइसी र ललितपुरको आशिष ओम साइरामले टावर निर्माणको ठेक्का लिएका हुन् । भ्यु टावर सय मिटर अग्लो १८ तलाको हुनेछ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत निर्माण भइरहेको भ्यु टावर ०७९ पुससम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
भ्यु टावरको ७२ मिटरसम्म अवलोकन र व्यापारका लागि प्रयोग हुनेछ । त्यसभन्दा माथि मानिस जान नमिल्ने टावरको टुप्पो रहने सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयका फिल्ड इन्चार्ज भूपेन्द्रकुमार यादवले बताए । ‘भ्यु टावरको १७औं र १८औं तलाबाट भ्यु हेर्न मिल्छ । अरू तला व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छन्,’ उनले भने, ‘साना पसलदेखि बैंक, रेस्टुरेन्ट, सेमिनार हलसम्म हुन्छन् ।’
पुस १२ गते, २०७७ - ०६:४७ मा प्रकाशित